Kumutswa kweKam - Afrikhepri Fondation
Janus: pendi naZirignon Grobli
Kuverenga: 3 mins
NHatina kukwanisa kusiya hunhu sezvazviri ikozvino. Ari munjodzi iri pedyo yekudzokazve uye kuzviparadza, mhedzisiro inouraya yekutadza kwake kuratidzira zvishuwo zvake zvakashata.
Izvo zvaive zvakafanira kuisa "yekumisa" yekufananidzira munzira yekudzokera kumamiriro ehutsinye.
Chokwadi, nekuisa pfungwa dzedu pakuratidzwa kwe rusaruro, isu tine humbowo maererano nehunhu hwekuMadokero hunotsigirwa nekumanikidzwa kuti vadzore vanhu "nhangemutange", kuti vafunge uye vachengetedze infamous state ye subsistence dhizaini yekugadzira uye kukosha kwembiri yeiyo chena.
Kuzvidzora uye kufunga kwehunhu hwehunhu hweIndo-European, iyi ndiyo nzira yemashiripiti yakazvimisikidza ivo veIndo-European ideologues, vachishushikana kugadzirisa kune "maronda ekurwadzisa" akonzerwa nehukuru hwe tsika yevatema.
Iko nguva yezvemabhizimisi, hurumende yehurungu-capitalist, yakavapa mukana.
Saka Hegel, kuti ashambidze "yakaoma" yake yevana vevarungu vekupedzisira kuti vapinde munyika yakabudirira, mushure mekudonha kwehushe hweRoma, anofungidzira muzivo yemasikisi, iyo tsika yemurume weAryan yekupinda imwe vanhu uye vanotora zvigadzirwa zvebasa ravo rinorema rakaunganidzwa nemoyo murefu (chikonzero munhoroondo).
Kana ari Nietzsche, ndiye ari panotangira kurumbidzwa kwevatorwa vanoshora chiito chinofungidzirwa kuti chiSemite: "mhuka dzakatsvukuruka" kana kunyange "shiri dzinodya nyama", ivo vakavakira vasati varnished tsika, kune avo vavanobvambura kuti vadziparadzanise. pasina kubvunza mibvunzo yetsika. Hazvishamise kuti mukucherechedza kwake kwekuzvidira maonero eNhoroondo, Nietzsche akashanyirwa naHitler uyo, sechiratidzo chekufananidzira, akapa tsvimbo yake.
Hazvirambiki kuti huzivi nematauriro echiporofita emunyori we "saka akataura Zarathustra" inofanirwa kutorwa senziyo ku "kupandukira" kwechokwadi chenhoroondo chakaratidzirwa nekutanga kusingarambiki kwetsika yemadzitateguru ekutanga. Kamites.
Basa rakaitwa munhoroondo uye mitauro naCheick Anta Diop naTeophile Obenga nderekuramba kusingarambiki. Ivo vakabatsira kupa humwe humbowo hwekusaziva kwechitema budiriro.
Asi, zviri pachena kuti nzira dzekare nedzemitauro hadzina kukwana kubvira, munhu wese anozviziva uye anozvitaura, kupinda kwemurungu muhupenyu hwemurume mutema kwakashandawo kushungurudzika kwepfungwa uye kukanganisa. Muhunhu hwevaKemites .
Ndicho chikonzero nguva yasvika, mumaonero edu, kutora tsvakurudzo dzepfungwa dzinogona kuwedzera kusunungurwa kwedu kusvika pamwero wehutano hwepfungwa.
Chirongwa chekusimudzira chevatema hachifanirwe, kana chichiida kuzvipa chega mukana wekubudirira, dzivisa kurwisa kwekusarudzika mupfungwa izvo zvinopa ma kamites nenzira yakakodzera yekudzosera nhoroondo yavo nenzvimbo yavo mune nzanga yevanhu.
Kukundwa kwemurume mutema kunoisa kwaanowana, achishandisa psycho-therapy (nzira yekutanga inosanganisa mipiro ye psychoanalysis uye art art), kuzvitonga kuzere kwekuda kwake kwakaparadzaniswa nechido che'Murungu.
Grobli Zirignon, Psychart chiremba
Tarisa Bood diamond (2006)
Chakavanzika - Chinyorwa (2011)
Paul Bogle, muranda uyo akave gamba renyika reJamaican
Hurukuro yaBarack Obama kuvaAfrica